Sahal Issaakh | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Abaartu waxaa ay ka mid tahay masiibooyinka halista ah kuwaas oo saameeyn ku yeesha noolasha dhamaanteed, abaartu waa masiibo soo jireen ah taas oo dunida Illahay abuurtay ka dhici jirtay waqtiyaal hore, sida Illaahay (SW) Quraankiisa ku sheegay qisadii nabiyulaahi Yuusuf markii uu fasiraayay riyadii boqorkii dalka Masar xiligaas in ay ka dhici doonto dalka masar 7 sano oo aaran ah oo ay ka dambeeyso 7 sano oo abaar ah ayaa daliil noo ah in ay abaartu tahay masiibo soo jireen ah. Hadaba su’aasheydu waxay tahay sidii ayaan aga bixi karnaa abaarta ku habsata dalkeena Soomaaliya waqti xaadirkaan aan joogno?. …
Waxaa ay ahayd maalin sabti ah subixii hore waxaan soo aaday magaalada waxaan fariistay maqaayad shaaha lagu cabo. Waxaa ay isheydu qabatay labo wiil oo aan da’doodu ku qayaasay mid 10 jir iyo mid 7 jir ah oo caseeyo ah uuna ag fadhiyo cunug yar oo 9 bilood jiro. Waxaan weydiiyay wiilashii yaa dhalay wiilkaan yar? Waxaa ay iigu jawaabeen ‘‘hooyadaanada ayaa nooga tagtay, waxay ku maqan tahay caws ay beeraha ka soo gurto marka anaga ayuu nala joogaa’’. Wiilashaan yaryar ayaa markii ay rabaan in ay meela kale wax ka soo caseeyaan xambaarta wiilka yar ee walaalkood ah. Tani …
Wadno Xanuun Inta badani waxay dhacdaa markii mid ka mid ah halbowlayaasha dhiiga u sida wadnaha ay xirmaan. Wadnaha waa xubinta u qaabilsan jirka in ay bamgareeyso dhiiga wadnaha waxuuna u qeeybsamaa la qeybood oo kala ah ruga bidix iyo rugta midig. Rugta bidix waxaa soo galo dhiig nadiif ah oo oksijiin badan leh kaas oo uu wadnaha u bamgareeyo jirka intiisa kale si uu aga faa’ideysto iyo Rugta midig, waxaana soo gala dhiig wasaqeeysan oo uu karboonku ku badan yahay dhiigaasi waxuu wadnaha u bamgareeyaa sambabada si ay ugu daraan ogsijiin ugana nadiifiyaan karboonka ku jiro. Calaamadaha Xabadka oo …
Kadib burburkii ka dhacay dalka Soomaaliya waxaa meesha ka baxay dhamaan nidaamyadii waxbarasho ee dalka ka jiray, waxaa burburtay wasaaraddii waxbarashada dalka Soomaaliyeed. Waxaa dhumay muqararkii waxbarashada dalka. Markii laga soo laabtay qixii waxaa ay dadku danta ku qasabtay in la furo iskuulo yar yar oo ay shaqsiyaad leeyihiin oo ay dhigaan macalimiin ay tayadooda waxbarasho liidato. Intaa ka dib waxaa soo ifbaxay baahi baahsan ee waxbarasho. Shaqsiyaadkii lacagta haystay waxay ilmahooda waxbarasho ugu dirsadeen dalalka dariska nala ah sida Kenya iyo Etoobiya balse waxaa ay nasiib daro ku dhacday kuwa badan oo aan caruurtooda u awoodin in ay …
Sumow Sun waa wax alaale ee markii uu qofka taabto ama laqo awood u leh in ay u keenaan qofkaas dhibaato, taas oo sababi karta dhimasho. sumow gu waxuu u dhici karaa labadaan nooc oo kala ah mid kama ah iyo mid kas oo uu qofka u qasdiyo in uu isticmaalo suntaas. Suntu waxay jirka ku gali kartaa siyaabahaan soo socda:. In ay ka gasho afka (Mid adko ah iyo mid dareera ah labaduba) In ay ka gasho maqaarka (Cirbad lagu mudo qofka ama qaniinyo) In ay ka gasho sanka (Sida gaasaska kala duwan iyo qaaca sumeysan) Suntu waxa ay …
Waxaa ay dalka Kenya ku noolaayeen qoxootiga Soomaaliyeed ee Xaryaha Dhadhaab in ka badan mudo 20 sano ah, waxaa maanta qaangaar ah ama inta uu guurasay wax dhalay wiilkii lagu dhalay xaryahaan. Waxaa ay dad ku nool ka faa’ideystaan waxyaabo badan sida waxbarasho lacag la’aan ah iyo in qaar ka mid ah eheladooda loo qaaday wadamadda Mareykanka oo kuwa xaryaha ku haray u soo diraan lacago ay ku noolaadaan. Soomaalidu waa dad Illaahay ganacsiga haybad u siiyay waxaa ay abuurteen ganacsi , waxaa dhacday in ay soo jiidasho ku sameeyeen dadkii wadanka Kenya u dhashay. Waxaa bilowday hormar la taaban …
Gubasho gubashadu waxaa loo kala qaadaa qeybahaan soo socda Gubashada heerka 1aad waxaana loo yaqaanaa afka qalaad (Superficial) Waxaa uu dhaawac gaaray oo kaliya qeybta ugu koreysa maqaarka oo loo yaqaan epidermis. Calaamadaha gubashada noocaan waxaa ka mid ah in uu maqaarka gaduudto, barar yar iyo xanuun. Tani waxay bugsootaa ayadoon ku reebeynin nabaro jirka. Gargaarka Gubashada Dhex gali biyo qabow ah qeybta gubatay 10 ilaa 45 daqiiqo ama isticmaal maro qoyan. Qaboowga waxaa uu joojiyaa in uu dabka ku sii fidin unugyada kale ee jirka. Waxaa kale oo aad isticmaali kartaa Aloe iyo Moisturizer lotion. Heerka Labaad Ee Gubashada …
Dhiig Bax Dhiig bax waa waxyaabaha ugu badan ee keena dhimashada sidaa daraadeed, joojinta dhiig baxa dibada waa in la siiyaa ahmiyada kowaad. Dhiig baxa waxaa loo qeybiyaa dhiig bax dibada ah iyo dhiig bax gudaha ah. Noocyada dhiig baxa Dhiig baxa halbowlayaasha Dhiiga waxaa uu u socdaa si xawli ah. Dhiiga waa uu sii saa’idaa garaaca wadnaha awgiis wayna adagtahay in la xadido. Dhiig baxaani waa mid aad qatar u ah maadaama uu qofka dhumin karo dhiig badan oo Oxygenated ah. Dhiig baxa arooriyaasha Waa ay fududahay in la xadido sababtoo ah dhiiga ku jira arooriyaasha waa dhiig …
Jabka waxaa loo kala saaraa labo qeybood oo kala ah jab fudud (Xiran) iyo jab ay xaaladiisu adagtahay loona yaqaano jab furan. Jab fudud (Xiran) Majiro dhaawac gaaray maqaarka korkiisa meesha jabtay. Jab Furan Waxaa dhaawac gaaray maqaarka meesha jabtay. Waxaaa laga yaabaa in ay lafta meel ka soo jeedo. Siddee Lagu Ogaadaa in uu Jiro Jab. Qofka markuu dhaawaca gaaro waxaa wehliyo: Xanuun Qofka ma awoodo in uu isticmaalo xubinta jabtay Qalooc aad ka dareento xubinta dhaawaca soo gaaray Barar Danqasho qeybta ay wax gaareen. Gargaarka Degdegga ee Jabka Xiran Meesha jaban ka dhig mid aan dhadhaqaaq lahayn si …